Moorgan iyo Mahuraan:Wareysi Suugaaneed Xiiso badan Oo Baashe Moorgan Lala Yeeshay - Haldoornews
Moorgan iyo Mahuraan:Wareysi Suugaaneed Xiiso badan Oo Baashe Moorgan Lala Yeeshay
Moorgan… Gacan-ku-dhiigle Moorgan.. Moorgan iyo Faqash.. Mujaahid Moorgan.. General Moorgan.. Waa magac aan weligii maqli jiray, dadkuna garanayaan, weliba ay aragtiyo kala duwan laga qabo. Magaciisa dhammayska tirani waa Maxamed Siciid Xirsi (Moorgan), wuxuu ahaa sarkaal ka tirsanaa xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre misana xidid la ahaa Madaxweynihii Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga Soomaaliya.
Intii aanu Madaxweyne Siilaanyo talada dalka la wareegin ayaan arkay mareeg la yidhaahdo www.somaliland,org oo si xagjir ugu hadasha afka Xisbiga KULMIYE, welibana si qaawan u weerarta xitaa dadka xisbiga ku jira ee ay Guddoomiye Siilaanyo is-qabtaan. “Waxa leh wiil ay madaxweynaha inantiisa qaba, oo lagu magacaabo Baashe Cawil” ayaa la igu yidhi. Judhiiba inuu ninkani hore u soo fadhiyo ayaan dareemay.
27kii Julaay 2010ka markii uu Siilaanyo la wareegay kursiga ugu sarreeya talada dalka ayaan arkay Baashe Cawil Xaaji Cumar oo magaciisa iyo saamayntiisuba kor u kaceen. Waa ninkii isaga ahaa oo sita magacii Moorgan. Safarro dibadeed oo uu raacay, mashaariic uu dhuunta u fadhiyo, dawladda oo uu dhex boodayo, falal badan oo uu sameeyay ayaan la yaabay. Tallaabooyinkiisu waxay ka baxsanayeen xuduudda gacaltooyada/xididnimada. Ninkani wuxuu si buuxda u adeegsan jiray awoodda madaxtooyada. Ma maqli jirteen “dameeri isku hallayn ayay hooyadeed dababada uga nuugtaa”. Maamuuska dawladnimo ayuu meel-ka-dhac iyo boog ku ahaa.
Haddaba waxa yaab igu sii ahayd markaan arkay isaga oo loo magacaabay Safiirka Somaliland ee Imaaraadka Carabta oo dal aynu ka sugaynnay mashaariic badan sida biyaha, lana hadal hayay in lagu wareejinayo dededda caalamiga ah ee Berbera. “Illeen tan xukuumadi ma xishooto” ayaan hore u maqlay.
Baashe Moorgan waxa aan la yeeshay wareysi suugaaneed. Laba magac oo Moorgan iyo mahuraan ah ayaanu kala sidannaa. Waxyaabaha uu soo hadal-qaadayo waxa ka mid ah mashaariic badan oo la siiyay dad Madaxtooyada la ehel ah sida mashruucii madaarka Hargeysa, mishiinkii gawaadhida baadhayay ee Berbera ay Golaha Wakiilladu diideen, dhul u dhow Dekedda Berbera oo qoyska iyo tolka madaxweynuhu qaateen, shidaal-baadhista sida loo maroorsaday, buurta SIIMOODI ee la guranayo IWM. Haasaawihi sidan ayuu u dhacay
Mahuraan dal jecel iyo
Nin muwaaddinaan ahay
Maandhow su’aal baan
Kuula soo muraadee
Mufti iyo sidii sheekh
Macnaheeda ii qeex
Illaa maalintii uu
Majaraha la kowsaday
Saaxiib waan maqlaayoo
Bal macnee wixii jira
Wuxuu Moorgan igu yidhi
“Madaxii ha raagee
Mar xigaalkay weeyaan
Marna xididkay weeyaan
Sida ceeshka iyo milix
Ayaa laysku milan yahay”
Waa inaanu madhinnaa
Maalkiyo dan guud iyo
Wax kastoo macaan-leba”
Midhadh aan kaaga taabtee
Marsadii Berbera goor
Anoo maagganaa hawl
Mishiin baadha gaadiid
Anoo soo macmalayoo
In mashruuc dhan laga furo
Malyuunaadna laga helo
Milikhsiga u sarakaco
Maya ugu codeeyoo
Mooshinkay ka keeneen
Murugaan ka qaadee
Yaa milaygan kala dira
Masaxoo dhammaan tira”
“Milaygay Kuwayd tidhi
An malyuunno lacagaa
Horta yaa macquuloo
An mashruuca siinnaa?
China HORN-ta loo miis
Naqad ka u mug weynoo
Madaarkii Cigaal iyo
Macrad Sheybe leeyaa
Moodharrada ku iibshoo
Mar labaadna dhagax-shiid
Cummaanigu ka madaxyaa
Masallaha ku yaalloo
Mabda’aygu wuxuu yahay
Intaan meesha joognaba
In maxaafsi lagu guro
Mood aan la tirin karin
Muddo kooban lagu helay
Ma malayn karaynnee
Murti Rayte uu yidhi
Milicsiga ku daymood”
“Maayarkaa Berbera iyo
Waxan maandhe bixiyeen
Gaadiidkaa meel aan
Musuq ugu xareynniyo
Dhul aan meherad geynnoo La soco sheeko dheer insha Allah…
Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo ka mid ah Madax dhaqameedka Somaliland ee Gobolka Sool ayaa warbaahinta uga warbixiyey socdaal ku saabsan adkaynta nabadda oo uu ku tegay deegaano ka tirsan Gobolkaasi Sool
Safarka Waftiga Siilaanyo ee Gobolada Barri oo Noqday Olole Siyaasadeed iyo Badhasaabka Gobolka Sanaag oo Shacabka ku leh Cirro Cod ma Siinaa.